ख्याल गर्नुभएको छ ? धनी र कंगाल हुने पुरुषको कानबाटै थाह हुने…. कस्तो छ तपाइको कान ? — SuchanaKendra.Com
आजसम्म त कानको काम सुन्ने मात्र हो भन्ने सोच्नुभएको छ होला । तर समुन्द्रसास्त्रको मान्यता अनुसार कानका आधारमा मानिसको भाग्य निर्धारीत हुने बताइएको छ । यसैगरी कानकै आधारमा मानिसको ब्यक्तित्व पनि निर्धारण हुने बताईएको छ । यसैकारण तपाईपनि आफ्नो कान ऐनामा हेरेर आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ । समुन्द्रशास्त्रको मान्यताअनुसार यदि तपाईको कान छोटो छ भने निकै बुद्धीमानि हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जुन मानिसहरु जन्मंदा नै कान लामो भएर जन्मेको छ त्यस्तो मानिसको आयु लामो हुने समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाईन्छ ।